Iindaba - Umzi mveliso wokukhanya kwesitrato elanga "uqhuma iindudumo" kwakhona, imfihlo emva kwebhetri
Umzi mveliso wokukhanya kwesitrato elanga "uqhuma iindudumo" kwakhona, imfihlo emva kwebhetri
Kwiminyaka yakutshanje, amandla elanga akhule ngokukhawuleza kwaye asasazeka kwiindawo ezahlukeneyo, ikakhulu ngenxa yokwehla kwexabiso le- iiseli zelangakunye nokugcinwa kwamandla. Njengenxalenye ebalulekileyo yeemveliso zamandla elanga, ukunciphisa iindleko kweeseli zelanga kukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza kweshishini lamandla elanga. Ukujonga imeko yophuhliso lweli lizwe lam lokukhanya kwesitalato selanga, amanye amaziko aqikelela ukuba imveliso iyonke kulindeleke ukuba ibe kwizigidi ezingama-20.25 ngowama-2020. Ngo-2020, amandla emarike yezibane zasesitalatweni aya kufikelela kwi-60 yeebhiliyoni zeerandi.
Izibane zesitalato zelangakufuneka babe nophuhliso olungcono; kodwa ngengxaki yobomi bebhetri bezithuthi zamandla amatsha, iibhetri ezininzi zisusiwe. Kwimeko yemigaqo-nkqubo kunye nemigaqo yesizwe engekho semgangathweni kunye nokusetyenziswa okungagungqiyo kwetekhnoloji yokusetyenziswa kwe-echelon, abavelisi abaninzi ukuze bakwazi ukujongana nezi Bhetri kujongwana nazo ngexabiso eliphantsi, okanye zithengiswe ngetoni, ke ixabiso ligqithise isezantsi, kwaye ezinye iindleko zinokuvela kwi-1 / 5-1 / 10 yeebhetri eziqhelekileyo. Zingaphela ixesha elingakanani ezi bhetri? Abathengisi abanazantsi. Ke ngoko, ezi mveliso aziqinisekiswanga, kwaye kuba uninzi lwazo ziintengiselwano zemali, akukho siqinisekiso emva kokuba intengiselwano igqityiwe.
Izinto eziphambili zeekhemikhali zebhetri zenziwe nge-electrode elungileyo kunye nokwahlulahlula i-electrode electrode, njl. kwaye ezi zinto zinomjikelo wobomi. Thatha i-lithium iron phosphate njengomzekelo, ubomi bomjikelo bunokufikelela kumaxesha e-2000, ke njengoko inani lemijikelezo lonyuka, izinto zekhemikhali kulo Utshintsho lwenzeka, lwenza ukuba umjikelo wobomi bonke ungaqiniseki. Thatha iteksi yombane emsulwa eShenzhen njengomzekelo. Incoko yomhleli nenkosi. Iteksi yabo yombane ihlawuliswa kabini ngemini, kwaye oku kukutshaja okuphezulu nangoku. Umjikelo ngamaxesha ama-2 ngemini, kwaye inani lemijikelezo yiminyaka emi-3. 2 * 365 * 3 = 2190 amaxesha. Inani lemijikelezo ye- lithium yentsimbi phosphate ibhetriAmaxesha angama-2000, kwaye inani lemijikelezo alinakufikelelwa emva konxibelelwano olungaphezulu kunye nokunxibelelana okufanayo kwizithuthi zombane. Ukuba ibhetri ekhutshwayo kwisithuthi sombane emva kweminyaka emi-3 yokusebenza inobomi bomjikelo wamaxesha angaphezu kwama-2 000, kwaye ngokwembono yeempawu zayo zeekhemikhali, ubomi obunokusetyenziswa abunakuqinisekiswa. Kungenxa yoko le nto kungekho mvelisi webhetri enobuganga bokwenza oku. Isizathu sokuba ibhetri iye kwiwaranti.
Izibane zesitalato zelanga zihlala zisetyenziswa njengesixhobo sesizwe sesiseko, kunye neempawu zobunjineli, ukukhonza abantu, kunye nokunxulumene nobomi benene babantu, ke ukuthembeka, ukhuseleko kunye nozinzo lweemveliso zifuna ngakumbi. Kwaye iibhetri eziphelelwe lixesha ziyasetyenziswa izibane zendlela zesola eluncedo eluntwini, kwaye kukho ingozi enkulu yokhuseleko. Ibhetri engasebenziyo ngokwayo ineengozi ezinkulu ezifihlakeleyo, kuba ibhetri ephelelwe lixesha idlulise umrhumo omde kunye nomjikelo wokukhupha, kwaye ubomi bayo kunye neempawu zemichiza azisaqinisekiswanga. Kufana nomntu owenziwe utyando lwentliziyo kwaye kufuneka amyeke abaleke ixesha elide ngokufanayo nogqatso lomdyarho. Isenokungabi nangxaki, kodwa umngcipheko uphezulu kakhulu. Nangona kunjalo, njengemveliso yeeprojekthi zeziseko zophuhliso, izibane zezitalato zelanga azamkelekanga. Oku kunxulumene nobomi nokhuseleko lwabantu.
Eyethu ukukhanya kwesitalato yelanga ziyasetyenziswa iklasi ibhetri ye-lithium, inokuhlala iintsuku ezingama-3-5 zemvula ene-lumen resutlt elungileyo